Student Archives »Hodges University
Fantany avy eo izay fantany izao - #MyHodgesStory Martha "Dotty" Faul Talohan'ny nisoratana anarana tao amin'ny University of Hodges i Martha "Dotty" Faul, dia nandany asa nandritra ny 20 taona teo amin'ny sehatry ny fampiharana ny lalàna tao amin'ny Biraon'ny Sheriff DeSoto County sy ny biraon'ny Sheriff County Charlotte. Manomboka amin'ny fisafoana an-dalambe amin'ny asany amin'ny maha depiote lefitra ka hatramin'ny fikarakarana ny fanadihadiana heloka bevava [...]	Hamaky bebe kokoa
Fanosehana amin'ny fetra
Manery amin'ny fetra farany - Steffanny Golding Miorim-paka Mihoatra noho izay rehetra mpahay fizika sy mpahay simia fanta-daza, Marie Curie, indray mandeha hoe: “Tsy mora ho antsika rehetra ny fiainana. Fa ahoana izany? Tokony hanana fikirizana isika ary, ambonin'izany rehetra izany, ny fahatokisantsika tena. Tsy maintsy mino isika fa nahazo fanomezana ho an'ny zavatra iray isika, ary io zavatra io, na inona na inona vidiny, [...]	Hamaky bebe kokoa
Mianatra mitarika amin'ny ambaratonga rehetra
Ahoana no nianarana hitarika olona iray mpamono afo manana herim-po Hodges Efa nandaha-teny ve ianao hoe: "Tsy dia misy ora firy isan'andro" raha mijery ny kalandrie ianao? Isaky ny ora dia manana asa na adidy hafa, ary raha tsara vintana ianao, ora vitsivitsy dia atokana ho an'ny torimaso. Mora ny mieritreritra fa [...]	Hamaky bebe kokoa
Teknika enina hahombiazana amin'ny sehatry ny asa
Teknika enina hahombiazana amin'ny sehatry ny kariera Nosoratan'i Jama Thurman, mpitantana ny serivisy momba ny toro-hevitra sy ny asa momba ny asa. Mety ho iray amin'ireo kandidà mifaninana amin'ny sain'ny mpampiasa ianao, saingy afaka mahazo tombony mihoatra ny hafa ianao amin'ny fanarahana ireo torolàlana momba ny asa [...]	Hamaky bebe kokoa
A Life of Firsts Ahoana ny fomba nahatratraran'ny mpianatra tranainy iray ny tanjony tamin'ny alàlan'ny niainany ny A Life of Firsts. Raha afaka misafidy teny iray i Edward Davis hilazana ny tenany, dia ho "entina." Manomboka amin'ny fiainana anaty tafika, hatramin'ny fahazoana diplaoma amin'ny taranaka voalohany ary manohy ny fianarany amin'ny programa master, amin'ny fitantanana ny azy [...]	Hamaky bebe kokoa